‘नाइटिङ्गेल स्कूलले चर्काे शुल्क असुलेको छैन’ | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
‘नाइटिङ्गेल स्कूलले चर्काे शुल्क असुलेको छैन’
नयाँ वर्ष २०७५ को सुरुवातदेखि नै देशका विद्यालय भर्ना अभियानमा छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरुले लिने चर्काे शुल्कको व्यापक चर्चा चल्ने गरेको छ । यसवर्ष पनि संचारमाध्यमहरुमा अचाक्ली शुल्क लिने केही विद्यालयहरुको नामसहित समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् । किन विद्यालयहरुले अहिले चर्को शुल्क लिइरहेका छन् ? सामान्य जीवनयापन गर्नेका छोराछोरीले शिक्षा लिनै नपाउने अवस्था किन बन्दैछ ? लगायतका विषयमा निजी विद्यालय नाइटिङ्गेल स्कुलकी प्रधानाध्यापक रंजना प्रधानसँग अनलाइन पत्रिकाकी प्रबन्ध सम्पादक सुनिता बाटाजुले गरेको शिक्षा सम्वाद ।
यहाँ प्रधानाध्यापक रहेको विद्यालय नाइटिङ्गेलपनि महंगो विद्यालयभित्रै पर्छ ?
होइन । केही स्कुलहरु अचाक्ली महँगो छन् र तिनीहरुले चर्को शुल्क लिने गरेका रहेछन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । तर ती स्कुलहरुले चर्को शुल्क लियो भनेर आउने समाचारहरुमा प्रत्येक दिन जसो हाम्रो स्कुलको नामपनि जोडिएर आउँछ । यो कुरामा मेरो आपत्ति छ । भ्रम चिर्नुपर्ने अवस्था नै आएको छ । हाम्रोमा पुरानो विद्यार्र्थीका अभिभावकलाई शुल्कको विषयमा थाहा छ । तर नयाँ भर्नाका लागि आउने अभिभावकमा भ्रम सृजना हुने गरेको छ । महँगो शुल्क लिने स्कुल र नाईटिङ्गेलको शुल्क दाँजेर नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणले तिर्न नसक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने गरेका छैनौं ।
ठुला र नाम चलेका स्कुलहरुको टार्गेट विद्यार्र्थी समूह हुन्छ, तपाईंको स्कुलको पनि त्यस्तै होइन र ?
हामीले भर्नालाई टार्गेट गरेका छौं । आम नागरिकलाई फोकस गुर्न नै हाम्रो सुरुदेखिको उद्देश्य रहेको छ । हामी यत्तिकै स्थापित स्कुल बन्न सफल भएका छैनौं । यो अभियानमा सम्पूर्ण स्कूलभित्रको गुणस्तरिय टिम वर्कको फल हो । यो स्कूलले वि.सं २०७०, २०७१ र २०७२ सालको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन् भनेर नै शुल्कपनि अत्यन्तै तल राखेर पढाईमा राम्रो परिणाम दिने हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको छ । र, त्यसमा सफल हुँदै आएका पनि छौं ।
यस वर्ष वार्षिक र मासिक शुल्कमा कति वृद्धि गर्नुभयो ?
यस वर्ष विभिन्न कठिनाई र भवितव्य अप्ठ्यारालाई सहज बनाउन सकिने दूरलक्ष्य राख्दै विद्यार्थीहरुमा पनि उत्कृष्ट शिक्षाको वचनवद्धता कायम राख्न १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेका छौं । त्यस्तै छात्राबासमा बस्ने र दिवा छात्रावासमा बस्नेको लागि सुविधा लिए अनुसारको अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ऐच्छिक विकल्पमा राखिएको हो ।
न्युनतम शुल्क दर के कति रहेको छ ?
हाम्रो न्युनतम मासिक शुल्क कक्षा १ देखि ३ सम्मको समान रहेको छ, ३ हजार ६ सय । त्यस्तै ४ देखि कक्षा ६ सम्म ४ हजार । कक्षा ७ र ८ शुल्क ४ हजार ४ सय । कक्षा ९ र १० लाई ४ हजार ७ सय निर्धारण गरेका छौं । बस, खाजा, खाना र दिवा छात्राबास तथा छात्राबासको सेवा लिनेले अतिरिक्त शुल्क सेवा लिए वापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । बार्षिकको क्रमशः कक्षा १ देखि ६ कक्षासम्म ८ हजार निर्धारण गरेका छौं । त्यस्तै कक्षा ७ देखि १० लाई वार्षिक १० हजार रहेको छ ।
भर्ना शुल्क थोरै देखाएर अतिरिक्त शुल्कमा ढाड सेकाउने होला नि ? कैयौं विद्यालयहरु त्यस्ता पनि छन् ?
अतिरिक्त शुल्क भनेको सुविधाका आधारमा तिर्ने हो । अन्य स्कुलको नीति होला तर हामीले वार्षिक शुल्क शिक्षा नियमावलीले तोकेको र यो शीर्षकमा यति शुल्कमात्रै लिने भनेपछि त्यत्तिमात्रै लिने हो । हाम्रोमा नृत्य, कला र खेललगायतका शुल्क एक पटक वार्षिकरुपमा लिएपछि पुनः कुनै शिर्षकमा लिने चलन छैन । यो पटक भने हामीले अभिभावकहरुको आग्रहमा विद्यालयको झोला उपलब्ध गराएका छौं । विद्यालयको लोगोसहित र विद्यार्थीहरुको परिचयपत्र राख्ने मिल्ने झोला हामीले सुपथ मूल्यमै विद्यार्थीहरुको लागि उपलब्ध गराएका हौं ।
शिक्षा नियमावलीले तोकिदिएको नियम विपरितसमेत शुल्क बढाउने प्रचलन छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सबैले आफ्नो विद्यालयको शुल्क तोक्न पाउँछ, त्यो तोक्ने अधिकार विद्यालयलाई छ । तर त्यसको औचित्यको पुष्टि पनि हामीले गर्नुपर्छ । हामीले शुल्क लिइसकेपछि त्यस वापत दिने सेवाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । होइन भने, विद्यार्थी टिकाइरहन र विश्वसनियता बनाई राख्न संभव हुँदैन । र, स्कूलका संस्थापक अध्यक्ष टिएल चौधरी सरपनि शिक्षाप्रेमी र राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । देशको मन्त्री भईसक्नुभएका टिएल सरकै नेतृत्वमा स्कूल संचालित छ । यसकारण हामीसँग पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पनि जोडिएको छ ।
Previous articleमोटरसाइकल दुर्घटना
Next articleछोरो कुद्ने भईसक्यो, अझै उस्तै छ धरहरा ! (सन्दर्भ : भुकम्प दिवस)
विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र पठनपाठन नगराउन निर्देशन
शिक्षामन्त्रीले स्विकारे, ‘पठनपाठन तत्कालै सम्भव छैन ।’
‘सडकमा उत्रिएर खाना पस्किएको त्यो दिन’
घर नजिकैको स्कूलबाट एसईई हुने
अष्ट्रेलियन सरकारको निर्देशनले हजारौं विद्यार्थीलाई आहत
चीनमा यसरी देखियो कोरोना, चीनले यसरी जित्यो कोरोना !
गर्भवतीको मृत्यु : कोरोना लक्षण देखिएकी मृतकको जंगलमा दाहसंस्कार !
जाजरकोट प्रकरण : सहयोगको आश्वासन पाएपछि पीडित परिवार शव बुझ्न सहमत
कुर्सीमा बसेर फोन गरिरहेका वडाध्यक्ष एक्कासी बेहोस हुँदा…
UPDATE : PHOTO STORY : दश दृश्यमा हेर्नुस् दक्षिण ललितपुरको दुःख...
NEWS – भूकम्प : केन्द्रबिन्दु मुगु र हुम्लाको बोर्डर !
गोदावरीका मेयर गजेन्द्रको आग्रह : विदेश उड्नेहरु नहुनु बेपत्ता, नाम टिपाउनु...
स्थलगत रिपोर्ट : भीषण हावाहुरीले दक्षिण ललितपुरमा थपियो भय !
कोरोना जित्नेहरु बढे : देशभरबाट १५५ जना डिस्चार्ज !
कीर्तिपुर काण्डको चिरफार